५ पुष २०७५, बिहीबार ०७:५३
मगर समुदायको बाहुल्य क्षेत्र भएकाले उजुरी कम आएको हुनसक्ने अनुमान उहाँको थियो । “न्यायिक समितिमा उजुरी कम पर्नु भनेको समाजमा झैझगडा, द्वन्द्व कम हुनु हो”, संयोजक घर्तीले भन्नुभयो, “दुर्गम ठाउँ भएकाले कतिपय नागरिकलाई गाउँपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने थाहा नभएकाले उजुरी कम परेको हुनसक्छ ।”
सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा परेका अधिकांश उजुरी कामका लागि विदेश गएका व्यक्तिका श्रीमतीले अर्को विवाह गरेको विषयका थिए । उक्त गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक वागमती थापाका अनुसार पहिलो श्रीमान्ले विदेशमा रगत पसिना बगाएर काम गर्ने अनि श्रीमती भने सम्पत्ति कुम्ल्याएर अर्कोसँग जाने प्रवृत्ति बढेको छ । बालविवाह, बहुविवाह तथा श्रीमान् श्रीमतीबीचको झैझगडाका उजुरी पनि आउने गरेकामा सबै विवाद मिलापत्रबाटै टुङ्ग्याउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
थवाङ गाउँपालिकामा भने लेनदेनका उजुरी बढी देखिएका छन् । कागजविनै विश्वासका आधारमा लेनदेन गरेर पछि धोका खाएकाले उजुरी दिने गरेको न्यायिक समिति संयोजक रामकिरणी रोकाले बताउनुभयो । “श्रीमान् श्रीमतीबीचको झगडासम्बन्धी उजुरी पनि यहाँ आएकामा अनुभवको कमीले अघिल्लो वर्ष विवाद मिलाउन केही समस्या भए पनि यस वर्ष भने अलि सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विवाद व्यवस्थापनमा अनुभवी व्यक्तिको समेत सहयोग लिने गरिएको संयोजक रोकाले उल्लेख गर्नुभयो ।
दक्षिण रोल्पाको रुन्टीगढी र पश्चिम रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा भने पानीका मुहानको विवादसम्बन्धी उजुरी बढी छन् । बस्तीको विस्तार तर पानीको स्रोत कम भएका कारण आप्mनो गाउँपालिकामा पानीका मुहानसम्बन्धी विवाद बढी आएको रुन्टीगढी गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक छमाया पुनले बताउनुभयो ।
त्रिवेणी गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक सावित्रा बुढाका अनुसार कार्यविधि बनाएरै सामान्य अदालती प्रक्रियाअनुसार विवाद निरुपण हुँदै आएको छ । जग्गा विवाद, खानेपानी विवाद, श्रीमान् श्रीमतीको झगडा, विद्यालयको विवादका विषयमा छलफल गरी मिलापत्र गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लास्थित महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यले केही विवादमा आस्था, विचार, जात र भूगोलको आधारमा पनि निर्णय तथा मेलमिलापमा विभेद हुने गुनासो आउन थालेकाले यस्तो हुन नदिन न्यायिक समितिका संयोजकले साँच्चैको न्यायमूर्ति भएर न्याय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । (रासस)
सीमा बिबाद समाधानको माग गर्दै चितवनका युवाले पठाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
भारतविरुद्ध सरकारलाई सहयोग गर्न डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडे
अघोरी बाबा’की श्रीमतीविरुद्ध ठगी मुद्दामा ५ दिन म्याद थप
राष्ट्रवादी ओली कालापानीबारे किन बोल्दैनन् ? : देउवा
चितवनमा मानव बेचबिखन विरुद्ध गरे माईती नेपालले तीन दिने अभियान
शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश
कांग्रेस भन्छ – सीमा विवाद हल गर्ने जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री ओलीको